Dad taageersan xukuumadda Soomaaliya oo ku hor banaanaxayey Baarlamaanka oo rasaas lagu kala eryay (SAWIRO) - SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD | SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD
Dad taageersan xukuumadda Soomaaliya oo ku hor banaanaxayey Baarlamaanka oo rasaas lagu kala eryay (SAWIRO)
Muqdisho (RBC Radio) Ciidamada ilaalada Baarlamaanka Federaalka ayaa rasaas ku kala eryay dad taageersan xukuumadda Soomaaliya oo doonayay bannaanbax ay ku taageersan yihiin go’aankii Dowlada Soomaaliya ay ku dhiibtay Cabdikariim Qalbi Dhagax ka hor sameeyaan baarlamaanka.
Xildhibaanada Golaha Shacabka ayaa maanta dood ka yeelanaya arrinta dhiibista Cabdikariim Qalbi Dhagax, waxaana dooda oo illaa haatan socota ay tahay mid kulul oo xildhibaanadu ku kala aragti duwan yihiin.
Dad dibadbaxa waday oo u badnaa haween iyo dhalinyaro ayaa sitay boorar ay ku dheggan yihiin sawirada Madaxweynaha, Raisul wasaaraha iyo guddoomiyaha Golaha Shacabka.
Waxayna dibadbaxayashu ku dhawaaqayeen inay taageersan yihiin go’aankii ay qaadatay Dowlada bishii hore ee ay mid ka mid ah xubnaha jabhadda ONLF ugu dhiibtay Dowlada Ethiopia. Arrintaasi oo dood adag, halisna gelisay xukuumadda Raisul wasaare Xasan Cali Kheyre ay ka taagan tahay.
Ciidamada ilaaliya baarlamaanka ayaa rasaas cirka ugu riday dadweynaha markii ay ku soo dhowaadeen xarunta baarlamaanka, taasoo keentay in dibadbaxayaasha ay ku ksla cararaan Taallada Sayidka.
Qaar ka mid ah qabanqaabiyaasha bannaanbaxa ayaa warbaahinta u sheegay inay ka xun yihiin in rasaas loo adeegsado bannaanbaxooda, iyagoo sheegay inay ahaayeen dad dowlada taageersan.
Waxaa laga war dhowrayaa waxa ka soo baxa dooda ay leeyihiin xildhibaanada oo haatan ka socota xarunta Golaha Shacabka.